Kora 38ffaa Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii
Ummatni oromoo qabsoo hadhaa'aadhaan bilisummaasaa gonfachuuf sirna bittaa Abashaa waliin geggeessu keessatti TBOJ shoora guddaa galmeessaa jira. Sirni bittaa Abisiniya ilmaan oromoo gabroomfachuudhaaf bara dheeraa hacuuce keessatti araddaasaa irraa buqqisee, qabeenyaa isaa saamee, mirga isaa sarbee, afaan, aadaa fi seenaa isaa awwaalee, ilmaan oromoo galaanatti akka dhumanu, kan hafan addunyaa irratti akka faca'anu godhee, gariin mana hidhaatti akka dararamanu kaan kaan irbaata rasasa isaa akka ta'anu godhaa jira.
Uumatni oromoo guddichi kun rakkina bara dheeraa akka lakkaa'u godheera. Har'as mootummaan TPLF wayyaanee uummata oromoo addatti salphisuu, dadhabsiisuu fi ajjeesuu irratti hojjechaa jira. Wayyaaneen irra caalaa uummata oromoo kana koloneeffachuun isaa dantaa diinagdee fi siyaasa isaatiif. Sirna dimokiraasii sobaa isaa keessatti uummata bal'aa kana doorsisee sagalee hedduun argadhe jechuudhaan umrii isaa dheereffatee jira.
1.Seera hirmaannaa qabeenyaa fi hojii argachuu abbaan hirree mootummaa TPLF-wayyaanee qomoo isaatii fi miseensa dhaaba isaatiif diriirse keessatti carraa hojii fi itti fayyadama qabeenyaa argachuu dhabuudhaan dargaggootni ilmaan oromoo fi lammiiwwan Itiyoopiyaa biroo ofi jiraachisuuf jedhanii biyya Arabaatti akka nama biyya hinqabnee, lammii Itiyoopiyaa hintaanettis mootummaan Itiyoopiyaa lakkaa'ee reebichaan lubbuunsaani biyya Arabaatti darbeef bulchiinsa mootummaa wayyaanee ni balaaleffanna.
2.Yeroo ammaa ilmaan oromoo shororkeessitoota jedhamanii mana isaaniitii dirqiin fuudhamanii mana hidhaa wayyaaneetti reebichaan du'anii reeffi isaanii mana isaaniitti ergamaa jira. Barattootni oromoo mooraa universiitii adda addaa keessatti rasaasa wayyaaneetiin du'aa jiru. Lubbuun lammiiwwan keenyaa kun sababa qabsoo bilisummaa uummata oromoof darbaa jira. Kanaafuu nu miseensotni TBOJ qabsoo isaanii kana galmaan ga'uudhaaf kutannoodhaan itti fufna.
4.Uummatni oromoo mirga amantii isaanii sarbame gaafachuudhaaf
6.TBOJn Jaarmoole QBO fi bu’a isaani argamsiisan kabajuudhaan ijaarsa bilisa ta'e bilisummaa uummata oromootiif qabsa’aa kan jiru ta'uusaa hubannee seera ittiin bulmaata keenya kora kana irratti ragga'ee fi murteewwan kennaman hundaa sagalee guutuudhaan ni deggerra.